Arsenal oo 1-0 ku Garaacday Kooxda Norwich City, Man City oo dirqi ugu badisay Liecester City, Natiijooyinka kulamada la ciyaaray Premier League-ga | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Arsenal oo 1-0 ku Garaacday Kooxda Norwich City, Man City oo dirqi...
Arsenal oo 1-0 ku Garaacday Kooxda Norwich City, Man City oo dirqi ugu badisay Liecester City, Natiijooyinka kulamada la ciyaaray Premier League-ga
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guusheedii iyo dhibcihii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan ka heshay Norwich City oo ay si dirqi ah ugaga badiyeen garoonka Emirates Stadium kaddib saddex ciyaarood oo si xidhiidh ah looga soo badiyey.
Ciyaartoyda Arsenal ayaa haystay digniinta ah in ay suurtogal tahay in shaqada laga caydhiyo Mikel Arteta haddii ay guul-darro kale soo hooyaan maanta, waxaana ay kaga falceliyeen bandhig fiican inkasta oo ay marar badan halis galeen oo goolka madiga ahna ay waqti dambe heleen.
Arsenal oo ay ugu soo bilowdeen saxeexyadii cusbaa ee Martin Odegaard, Ben White, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu iyo Albert Sambi Lokonga ayaa waxa goolka madiga ah u dhaliyey Pierre-Emerick Aubameyang daqiiqaddii 66aad ee dhamaadka qaybta hore, waxaana goolkan caawiye uga noqday Nicolas Pepe oo kubadda u dhiibay.
Guushan ayaa waxay Arsenal ku heshay saddexdii dhibcood ee ugu horreeyey ee horyaalka Premier League iyadoo afar kulan ciyaartay.
Manchester City ayaa iyaduna guul dirqi ah kala soo laabatay garoonka King Power Stadium oo ay ugu tagtay Leicester City, waxaana saddexda dhibcood ku hoggaamiyey Bernardo Silva oo qaybtii labaad u saxeexay goolka madiga ah.
Pep Guardiola oo kulankan kaydka dhigay ciyaartooyo ay ka mid ahaayeen Kevin de Bruyne, Raheem Sterling iyo Riyad Mahrez ayaa waxa guusha saddexda dhibcood ugu filnaaday goolka Bernardo Silva.
Man City ayaa soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League iyadoo yeelatay 9 dhibcood, waxaana ka horreysa Manchester United oo 10 dhibcood haysata, halka Tottenham oo galabta laga badiyey ay saddexaad u dhacday inkasta oo ay isku dhibco yihiin Man City.
Natiijooyinka kulamadii kale ee la ciyaaray
Crystal Palace 3-0 Tottenham.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey wada-hadallada u socda Rooble iyo Farmaajo – Xog
Next articleWarbaahinta Ingiriiska oo Cimaamada ku tuuray Cristiano Ronaldo, kana Hadlay Halista Man United ee Sanadkan